ग्रान्डी हस्पिटलले चकनाचुर पारिदियो सपना सबै ! – Rapti Khabar
कति सपना देख्नुभएको थियो दोर्जे लामा र निशाले आफ्नो दोस्रो सन्तानका बारेमा ! तर यो सपना सबै चकनाचुर पारिदियो ग्राण्डी इन्टरनेशनल अस्पतालले । पहिलो बच्चा १० बर्ष भैसकेकाले दोस्रो बच्चाको योजना बुनेको दोर्जे दम्पत्तिले ग्राण्डीका डा. पवनराज पन्तसँग झण्डै डेढ बर्षदेखि सल्लाह लिँदै आएको थियो । डा. पन्तकै सल्लाहमा दोस्रो बच्चा जन्माउने योजना बनाउनुभएका उहाँहरू गर्भमा जुम्ल्याहा बच्चा बसेको खबरले थप गद्गद् हुनुभएको थियो ।
व्यवसायमा निकै व्यस्त दोर्जे जुम्ल्याहा जन्मिने खुशीले श्रीमती सुत्केरी हुने २ महिनाअघिदेखि अस्पतालकै सल्लाहबमोजिम श्रीमती र पहिलो सन्तानको रेखदेखमा तल्लीन हुँदैआउनुभएको थियो । तर त्यस्तो खुशी छाएको ९ महिना पनि नबित्दै कहिल्यै नमेटी पीडा आइलाग्यो । १८ दिनको एउटा नवजात शिशु काखमा समेत लिन पाउनुभएन उहाँहरूले । यो पीडा स्त्रीरोग विशेषज्ञ पन्तले भन्दा पनि ग्राण्डीको एनआइसियू विभागमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको हदै सम्मको लापरवाही र व्यवस्थापन पक्षको कमाउधन्दाले दिएको थियो । यस्तै ठम्याई छ मृतक नवजात शिशुका पिता दोर्जेको ।
दोर्जे भावुक हुँदै भन्नुहुन्छ–जुम्ल्याहामध्येको ठूलो बच्चा त्यस्तो लापरवाहीले गुमाउनुप¥यो भने त्यही ग्राण्डीमाा राखेको भए सानो बच्चा पनि देख्न नपाउने रहेछौँ, श्रीमती निशा त पटक पटक मूर्छा पर्छिन् । सानो बच्चा जोगाउन तिम्रो खाँचो छ भन्दै सम्झाएर होसमा ल्याउनुपरेको छ उनलाई ।’
दोर्जे रोकिनै सक्नुहुन्न । उहाँ खुल्न मात्र चाहनुहुन्छ र थप्नुहुन्छ–२४ सैं घण्टा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गराइने एनआईसियुमा दोर्जेको दुईट बच्चा अक्सिजनसमेत लाउनु नपर्ने अवस्थामा गत असार २० गते जन्मेका थिए । तर ठूलोमा समस्या आएको देखाई एनआईसीयुमा राखी चाहिने÷नचाहिने अनेक खालका परीक्षण गरियो । तर १७ हौँ दिनमा एकाएक सोही बच्चामा अक्सिजन कम भयो भनी अक्सिजन चलाउने जानकारी गराइयो । त्यसपछिलगत्तै २ घण्टा बित्न नपाउँदै भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने निर्देशन आयो ।
त्यसको १२ घण्टा नबित्दै बच्चा बचाउन नसकेको भन्ने खबर आयो । दोस्रो बच्चा पनि पीडित छ । एउटा हातको घाउ पाकिसकेको छ भने अर्को हातमा पूरा निलो छ । त्यहाँबाट निशान अस्पताल नलगेको भए सानो बच्चाको पनि त्यही हालत हुने थियो । ग्राण्डीले राक्षसी व्यवहार गरेर एउटा बच्चा मारिदियो, अर्कोलाई असक्त बनायो । निशान अस्पतालले भने ग्राण्डीले अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पु¥याएको बच्चाको उपचार गरेर सकुशल फर्काइदियो । हाम्रा जीवनमा निशानका चिकित्सकहरु भगवान नै भैदिए ।’
आफूहरूलाई जस्तै बज्रपात कसैलाई नपरोस् भनेर शुभचिन्तक र आमसञ्चारमाध्यमहरूले साथ दिइरहेको दोर्जे बताउनुहुन्छ । अस्पताल पक्षले आन्तरिक रुपमा घटना मिलाउन मंगलबार नै आग्रह गरे पनि अस्पताल सञ्चालककै समय नमिलेकाले बुधबार वार्ता रद्द गरेको थियो ।
दोर्जेको परिवारले ग्राण्डीमा मृत्यु भएको बच्चाको लाश अहिलेसम्म बुझेको छैन । ग्राण्डीले सार्वजनिक रुपमै गल्ती स्वीकार नगरे र सरकारले छानविन समिति नबनाएसम्म लाश नबुझ्ने उनीहरूको अडान छ ।
सोही अस्पतालका निर्देशक डा.चक्रराज पाण्डेले भने महाराजगंज प्रहरी बिटबाट खटिएका प्रहरीको रोहबरमा अस्पताल र चिकित्सक कर्मचारीको कमजोरी स्वीकारे पनि उनीहरुउपर कुनै कारवाही नभएको बताउनुभयो ।
यसैबीच नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बुधबार यसै बिषयमा उक्त अस्पतालसँग यथार्थता माग गरेको छ ।
यति मात्र हैन एक महिनाअगाडि पनि ग्राण्डी अस्पतालकै एनआईसीयूमा भएको लापरबाहीका कारण सञ्जीव न्यौपानेको बच्चामा एनआईसियू कक्षमै संक्रमण भै ५ पटकसम्म शल्यक्रिया गर्दा जिर्ण बनाएको थियो । उक्त बिषयमा छानविनका लागि मुद्दा दायर भएकाले काउन्सिलले त्यस बिषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ । काउन्सिलले लिखित उत्तरसहित एनआईसीयू विभाग र अस्पतालका प्रमुखलाई काउन्सिलमा बोलाएको स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त अस्पतालप्रति धेरैको धारणा सकारात्मक नभएको दावी गर्दै समाचार स्रोत भन्छ–बिरामीमाथि आर्थिक र मानसिक शोषण गर्दै आएको देख्दा ठूलो आक्रोस उम्लिन्छ । अस्पतालको अनुगमन गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिल मान्छे मरिसक्दा पनि गम्भीर छैनन् । उनीहरू उल्टै लाचार हुँदै भन्छन्–मिडियाबाट सुनेका हौँ, लिखित उजुरी नपरेकाले छानविन गरेका छैनाँै ।’
भगवती तिमल्सिना/नेपाल समाचार पत्रबाट
पोखरामा ५३ वर्षअघि खसेको जहाजको त्यो टुक्रा, सुल्झेन अझै रहस्य
छ महिना अगाडि भर्खर लकडाउन सुरु भएको थियो । हरेक परिवारभित्र कोरोनाको त्रास सलबलाइरहेको थियो । पृथ्वीमा मानव सभ्यतामा नै कोरोनाले केही असर गर्ने आशंकासमेत केहीले बनाउन थालिसकेका थिए । आखिर यसको असर कस्तो हुनेछ भन्ने हरेक व्यक्तिको तर्क आ–आफ्नै किसिमको हुन थालेको थियो । यो रिपोर्ट सुनिल उलकले सुत्रन्युजका लागि तयार पारेका हुन् । […]
Posted on July 3, 2019 Author Rapti Khabar
डा. विष्णुराज उप्रेती शान्ति प्रकृया र संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम नसकिँदै देश फेरि द्वन्द्वमा धकेलिने हो कि भन्ने त्रासमा नेपाली समाज पुगेको छ । दश वर्षे द्वन्द्वबाट आजित बनेका नेपालीले फेरि अर्को द्वन्द्व चाहेका छैनन् । तर राज्य पक्ष र अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिले फेरि देश द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता र […]